Reallymụ mmadụ ga-adị mma karịa na Social Media | Martech Zone
Na ogbako a na-adịbeghị anya, mụ na ndị isi mgbasa ozi ndị ọzọ na-akparịta ụka banyere otu ihu igwe na-adịghị mma na-eto eto na mgbasa ozi. Ọ bụghị nke ukwuu banyere nkewa ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ozuzu ya, nke doro anya, mana banyere stampụ nke ọnụma na-akwụ ụgwọ mgbe ọ bụla esemokwu bilitere.
Eji m okwu ahụ zọọ n'ihi na nke ahụ bụ ihe anyị na-ahụ. Anyị anaghịzi akwụsị ịkwụsị inyocha okwu a, chere ihe ma ọ bụdị tụlee ihe ndị gbara gburugburu. Enweghị mmeghachi omume ezi uche dị na ya, naanị nke mmetụta uche. M ike nyere aka ma were oge a na-elekọta mmadụ media n'elu ikpo okwu dị ka Colosseum na mkpu si ìgwè mmadụ ahụ na mkpịsị aka isi ala. A na-adọka ma na-ebibi nke ọ bụla chọrọ ka iwe ha dajụọ.
Banye na stampụ mmekọrịta dị mfe ebe ọ bụ na anyị amaghị onye ahụ, ma ọ bụ ndị nọ n'azụ aha ahụ, ma ọ bụ nwee nkwanye ùgwù maka ndị ọrụ gọọmentị nke ndị agbata obi anyị họpụtara. Ugbu a, e nweghị ịrụzi mmebi nke ìgwè ehi… n'agbanyeghị ma onye kwesịrị ma ọ bụ na ọ bụghị onye kwesịrị ya.
Otu onye (a sị na m ga-echeta onye) kwadoro ka m gụọ Ya mere Ihere Na-emere Gị Ọha, nke Jon Ronson dere. Azụrụ m akwụkwọ ahụ n'oge ahụ ma chere ya mgbe m lọtara njem ahụ. Onye edemede ahụ gafere iri na abuo ma ọ bụ akụkọ gbasara ndị mmadụ na-eme ihere n'ihu ọha, na na mgbasa ozi mgbasa ozi, na nsonaazụ na-adịgide. Ihe si na ya pụta bụ ihe jọgburu onwe ya, na ndị mmadụ na-ezo maka ọtụtụ afọ na ọbụna ole na ole mere ka ndụ ha kwụsị.
Anyị Anaghị Mma
Ọ bụrụ na ụwa mara ihe kachasị njọ banyere gị? Kedu ihe kachasị njọ ị gwara nwa gị? Olee echiche kacha jọgburu onwe ya i chere banyere di ma ọ bụ nwunye gị? Kedu ihe ịkwa ọchị-agba kachasị ọchị ị chịrị ọchị ma ọ bụ gwa?
Dị ka m, ị nwere ike nwee ekele na ìgwè ehi agaghị enweta visibiliti n'ime ihe ndị ahụ gbasara gị. Mụ mmadụ enweghị ntụpọ, na ọtụtụ n'ime anyị na-akwa ụta na nchegharị maka omume anyị meere ndị ọzọ. Ihe dị iche bụ na ọ bụghị anyị niile chere ihu n'ihu ọha nke ihe ndị jọgburu onwe anyị anyị meworo. Daalụ ịdị mma.
Ọ bụrụ na anyị ndị ekpughere, anyị ga-arịọ mgbaghara ma gosi ndị mmadụ etu anyị siri mezie ndụ anyị. Ihe bụ nsogbu bụ na ìgwè ehi adịla anya mgbe anyị banyere n’igwe okwu. O noo nkele ndu anyi ziru anyi. Ndị mmadụ zọkwaghị ụkwụ ma ọ bụ pere mpe karịa anyị.
Wepu iwe na iwe na ọnụma niile na ịlụ ọgụ na nkwutọ, tinyere ụdị echiche ọjọọ ọ bụla. Nweenụ obi ọma na ọmịiko n’ebe ibe unu nọ, gbagharakwa ibe unu, dịka Kraịst gbaghaara unu n’ime Kraịst. Ndị Efesọs 4: 31-32
Ọ bụrụ n’anyị ga-agbada n’okporo ụzọ a, anyị ga - abụ ezigbo mmadụ. Anyị ga-achọ ịgbaghara ibe anyị ọsọ ọsọ dịka anyị na-achọ ibibi ibe anyị. Ndị mmadụ abụghị ọnụọgụ abụọ, anyị ekwesịghị ikpebi ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ. E nwere ezigbo ndị na-emejọ ihe. Enwere ndị ajọ mmadụ na-atụgharị ndụ ha wee bụrụ ndị ịtụnanya. Anyị kwesịrị ịmụta etu esi agụpụta ezi ihe ndị mmadụ bu pụta ụwa.
Nhọrọ ọzọ bụ ụwa dị egwu ebe stampụ juru na anyị niile na-ezochi, na-agha ụgha, ma ọ bụ na-eti ihe. Wherewa ebe anyị na-agaghị anwa anwa kwuo uche anyị, tụlee ihe ndị na-akpata esemokwu, ma ọ bụ kpughee nkwenkwe anyị. Achọghị m ka ụmụ m biri n’ụwa dị otu a.
Daalụ Jon Ronson maka ịkekọrịta akwụkwọ a dị mkpa.
Ngosipụta: Ana m etinye njikọ njikọta nke Amazon na post a.
Tags: Mgbakwunyeiweịlụ ọgụobi eberenchedoNdị Efesọsmgbagharajon monsoonụdịobi ọjọọakwụkwọ ahịaọnụmaihereịme ihenkwutọiru-újúzọọ